भर्खरै आयो दु'खद् खबर ! बाढी र पहिरोले सिङ्गो बस्ती नै लग्यो, मृ;त्यु हुने ३१ जना पुग्यो, ४३ बेप;त्ता (भिडियो हेर्नुहोस) -
Home News भर्खरै आयो दु’खद् खबर ! बाढी र पहिरोले सिङ्गो बस्ती नै लग्यो,...
भर्खरै आयो दु’खद् खबर ! बाढी र पहिरोले सिङ्गो बस्ती नै लग्यो, मृ;त्यु हुने ३१ जना पुग्यो, ४३ बेप;त्ता (भिडियो हेर्नुहोस)
भर्खरै आयो दुखद् खबर ! बाढी र पहिरोले सिङ्गो बस्ती नै लग्यो, मृ;त्यु हुने ३१ जना पुग्यो, ४३ बेप;त्ता
बेमौसमको वर्षाका कारण भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान बालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । तीन दिनदेखि निरन्तर पानी पर्दा काटेर खेतमा राखेको धान डुवानमा परेको छ । वर्षासँगै हावा चलेकाले नकाटेको धानलाई पनि क्षति पुर्‍याएको छ ।
Previous articleमामाघरबाट टिका लगाई फर्कीएकी सबितालाइ बाढीले बगायो
Next articleभारी बर्षाका कारण जताततै पानी भएपछि देक्चीमा बसेर गरे यी जोडीले बिवाह..